Orinasa manda fefy elektrika, mpamatsy - mpanamboatra fefy elektrika China
Insulator plastika, izay antsoina rehetra hoe insulator peratra, insulator peratra visy, fantsom-baravarankely elektrika fantsom-baravarana, insulator peratra herinaratra, insulator fefy, visy plastika ao anaty insulator, insulator peratra vatan-kazo, sns.
Avy amin'ny anarana farany, insulator peratra fametahana hazo, azonao atao ny mianatra fa ny insulator plastika amin'ny fametahana tariby amin'ny andry hazo.
TANANA GATE PLASTIKA
Ny tantana vavahady plastika dia natao hampiasaina amin'ny vavahady fefy elektrika. Ny rafitra lohataona amin'ity vavahady fefy plastika ity dia manome fihenjanana. Ity tantana am-bavahady ity dia manana plastika, mahazaka mahazo aina ary manana faritra vy. Ampiasao ity vavahady fefy fefy elektrika ity hisorohana ny herinaratrao rehefa manokatra ny vavahady ianao.
Ireo vavahady plastika dia matetika vita amin'ny polypropylene (PP), ary koa takelaka metaly nandrendrika mafana naroboka. Ankoatry ny polypropylene (PP), dia azo atao amin'ny fingotra ihany koa. Ka hisy vavahady fingotra hafa koa ho an'ny safidinao.
HALAFANA FANASITRANA PLASTIKA
Tariby fefy plastika, azonao atao koa ny miantso azy hoe fefy elektrika fefy elektrika, fefy tady herinaratra, tady fefy elektrika, tady fefy, tariby fefy herinaratra, tady fefy elektrika voafehy.
Ny tariby fefy plastika dia tady manify maromaro, izay matetika misy tadiny metaly sy kofehy polymer. Araka ny hateviny, azo zaraina ho fefy plastika fefy plastika sy tady poly fefy plastika izy io.
Ny fefy fefy plastika, azo antsoina koa hoe step-in poly fefy post, step-in post, plastika tread-in, poly poly post, electric poste.
Ity paingotra plastika ity dia azo apetraka haingana amin'ny fencing amin'ny faritra ivelany rehetra. Amboary ny perimeter fefyo amin'ny alàlan'ny fametrahana an'ity paositry ny fefy plastika vita amin'ny plastika ary avy eo mihazakazaka eo anelanelan'ny tsanganana maromaro ny tsipika fefyo.